Kutheni Na Isifrentshi Abantu Ngoko Ke Irresistible Indawo Esembinbdini Yevili Amaphepha
Sasivuya sipping a glass of iwayini yi-echibini oku kwemini phakathi girlfriends uthetha malunga abantu -yintoni enye into ayikwazi thina bathethe malunga. Emva zonke, sisebenzisa kwi-Us — xa ke ekugqibeleni, betha, nam kutheni na isifrentshi abantu ngoko ke irresistible. Ndicinga ukuba uninzi abafazi ingaba uyavuma kunye nam ukuba isifrentshi abantu kuba lonto yenza kubo irresistible. Bangabi kuba uninzi handsome nezinamandla, kodwa ngabo charming kwaye lovable. Kodwa yintoni yenza isifrentshi abantu ngoko ke eyahlukileyo kwezinye Europeans okanye Americans.
Wazalelwa Paris kunye impossibly blue amehlo, Vincent Cassel yi inkwenkwezi of European cinema. Famous kuba yakhe nangona sikwimeko yoqoqosho enzima guy iindima kunye eclectic nemigaqo yokusebenzisa imichiza, eyaziwa ngokuba ekubeni Monica Bellucci ke, umyeni, nangona babe zahlukane kwi emva kweminyaka ekubeni kunye. Uya kwaziwa kwihlabathi liphela ngonyana wakhe wefilim performances kwi-Ocean ke abalishumi Elinesibini kwaye Ocean ke, ishumi Elinesithathu, ngokunjalo Omnyama Iinketho. E kuphela ubudala, Gaspard Tullie sele kwaye internationally lunxulumano actor imibulelo indima Hannibal Lecter kwi Hannibal Lecter i-lemveli Yobubi apho lowo yenza ngesingesi. Kanjalo yaziwa internationally imibulelo indima yakhe kwi-Yves Ngcwele Laurent njalo.
Kanjalo»ubuso»Chanel ke perfume Bleu
Ndiyazi, lento ngqo a okungekuko oyikhethileyo kuba baninzi. Andinguye eyimfama, kwaye andiqondi ukuba ka-Gerard Depardieu njengokuba ubuhle icon, ndiyazi ukuba ukho yi-akukho kuthethwa handsome hero kodwa ukuba uke ebone kuye ukudlala Cyrano de Bergerac (isifrentshi yoqobo version) uza niyayiqonda kwakungekho engcono oyikhethileyo kuba uphawu kwaye kutheni ngoko ke, baninzi abafazi ingaba mad malunga naye. Nje umamele ividiyo ye Cyrano uthetha wakhe oyintanda Roxane. Njenge wakhe uza bazive yakho ngamodolo akhe ke ngathi ibhitumeni ngomhla uthetho olusezantsi ka-Cyrano kwaye yakhe beautiful mazwi. Icon isifrentshi cinematography, omnye ezimbalwa incredibly handsome isifrentshi actors. Nkqu ngoku iphelelwe yena ingu zinokuphathwa, kwaye ungabona ukuba bona kuye bakhe imihla wefilim Asterix, apho lowo yenza Julius Cesar. Nangona wazalelwa Senegal, Perez sibonwa a isifrentshi actor. Lowo wenziwe wacaphula esithi ndandisele ezilahlekileyo kunye akukho lizwe France yamkelwa kum. Vincent Perez ubani soulful, kweentlobo zezityalo-jonga malunga naye kwaye ukuba umamele kuye kwi-French, ungacinga nje inyibilika ngathi i-umkhenkce cream. Omnye zam endizithandayo imiboniso apho lowo imisebenzi ihamba kunye Isabelle Adjani ngu ‘La Reine Margot’. Efana Newsday wahlaziya: a wefilim Wazaliswa ukuba brim kunye dramatic usapho confrontations, ukufa-umandlalo scenes, poisoned iincwadi, ngesondo, inkululeko kwaye ingcali scenery. Wonke mzuzu ngu riveting, wonke actor inika bakhe bonke. Ingakumbi okulungileyo ingaba Vincent Perez njengoko Margot ke zinokuphathwa-blooded oyintanda, La Mole. ‘M. Pakora okanye Mat Pakora, omnye wam ozithandayo isifrentshi singers. Wayeneminyaka nje olugqibeleleyo kwi indima Robin Hood kwi-French musical comedy»Robin des Bios». Kanjalo yaziwa ngokuba wakhe omkhulu intliziyo njengoko enjalo olukhulu supporter lwenene wenza ingakumbi AIDS kwaye abantwana charities. Copyright Indawo Esembinbdini Yevili Amaphepha Inc.
kwaye zahlukeneyo abanini-mhlaba
Enye imveliso kwaye inkampani amagama abonakala zibe iimpawu zokurhweba ka-bazo abanini-mhlaba. Indawo esembinbdini yevili Amaphepha yi ebhalisiweyo Inkonzo Marko ka-indawo esembinbdini yevili Amaphepha, Inc. Indawo esembinbdini yevili Amaphepha kwaye Hubbers (ababhali) meyi earn ingeniso ekweli phepha ngokusekelwe affiliate budlelwane nabanye kwaye advertisements kunye partners kuquka Amazon, Google, kwaye abanye. Njengoko umsebenzisi kwi-EEA, wakho ufumana imvume efunekayo kwi izinto ezimbalwa. Ukubonelela engcono iwebhusayithi amava, indawo esembinbdini yevili amaphepha isebenzisa i cookies (nezinye efanayo ubugcisa) kwaye babe ukuqokelela, inkqubo, kwaye wabelane personal data. Nceda ukhethe leyo kwiindawo zethu inkonzo kufuneka kwemvume yethu ngokwenza njalo
Into ukuthetha malunga nge kubekho inkqubela phambi kwenu kuhlangana yakhe →